January 2017 - Sawirrotv
Wel-Welka la soo Gudboonaaday Soomaalida ku nool Magaalada Minneapolis ee Dalka Maraykanka (VIDEO)
January 31, 2017 – Soomaalida ku dhaqan magaalada Minneapolis ee Gobolka Minnesota ayaa ka wel-welsan hadii ay ka safraan dalka Maraykanka inay dib ugu soo laaban waayaan. Arrintan ayaa waxay xitaa saameynaysaa dadka haysta kaararka greenCard-ka, ardayda, iyo dadka doonaya iney Mareykanka galaan si loogu soo daweeyo iyo kuwo kale, waana sida uu sheegay Cabdi …
Wel- welka Soomaalida Maraykanka (VIDEO)
Arrintan ayaa waxay xitaa saameynaysaa dadka haysta kaararka greenCard-ka, ardayda, iyo dadka doonaya iney Mareykanka galaan si loogu soo daweeyo iyo kuwo kale. Hadaba dadka ka soo jeeda 7 dal ee xanibaada lagu soo rogay ayaa waxa ay garoomada diyaaradaha ee dalka Maraykanka kala kulmayaan tacadi aanan yarayn, iyadoo dadka qaar dib loogu celiyay wadamadii …
Warmurtiyeedkii Gudoomiye Bayle (VIDEO)
Guddoomiye Bayle ayaa sheegay in maanta dalka oo dhan ay ka jirtay cilad xagga Internetka ah , taasoo aan suurta gelin in dooda Toos loo daawado oo ay dhacdo. 12 Musharax ayaa maanta diiday in ay ka qeyb galaan dood wadaaga, ka dib markii ay sheegeen in xubno ka tirsan dowladda ay doonayaan in dooda …
Al Shabaab oo Soo Bandigay Sawirradii u Horeeyay ee Weerarkii Kulbiyoow (SAWIRRO)
January 31, 2017 – Ururka Al Shabaab ayaa maanta soo bandjhigay sawiradii u horeeyay ee dagaakii ka dhacay Saldhigga Ciidamada Kenya ku lahaayeen Deegaanka Kulbiyoow ee gobolka Jubada Hoose. Weerarkan ay Shabaab ku qaadeen Deegaanka Kulbiyoow ayaa waxa ay ku dileen sida ay sheegeen 67-askari oo ka tirsanaa Ciidanka dalka Kenya, waxaana weerarkan fuliyay Koox …
Maydadka Ciidamada Kenya ee Dagaalkii Kulbiyoow oo Wali Lagu soo Daabulayo Gudaha Dalka Kenya (VIDEO)
January 31, 2017 – Dowlada dalka Kenya ayaa weli soo daabulaysa maydadka ciidamadii dalka Kenya ee lagu laayay weerarkii saldhigga ciidamada Kenya ee deegaanka Kulbiyoow. Dowlada dalka Kenya ayaa hadda ka hor shaacisay in sagaal askari oo kaliya ay kaga dhinteen dagaalkii ka dhacay deegaanka Kulbiyoow, hase ahaatee qaar kamid ah saxaafada dalka Kenya ayaa …
Maydadka Dagaalkii Kulbiyoow (VIDEO)
Dowlada dalka Kenya ayaa hadda ka hor shaacisay in sagaal askari oo kaliya ay kaga dhinteen dagaalkii ka dhacay deegaanka Kulbiyoow, hase ahaatee qaar kamid ah saxaafada dalka Kenya ayaa tabineya in dhimashadu ay gaareyso ilaa 68 askari, Kooxda AlShabaab oo weerarkaas qaaday jimcihii lasoo dhaafay ayaa dhankeeda sheegatay in dileen 70 kamid ah ciidamada …